Soosaarka ursodeoxycholic acid iyadoo la adeegsanayo habka enzyme noolaha halkii laga isticmaali lahaa kiimikada qaabkeeda loo soo saaray ayaa xallisay dhibaatooyinka ilaalinta deegaanka iyo waxsoosaarka wax soo saar ee macaamiisheena Changde Yungang Biotechnology Co., Ltd., taasoo si weyn u hagaajisay wax soo saarka iyo tayada, hoos udhaca qiimaha wax soo saarka iyo kordhinta dheefaha dhaqaale. Mashruucan ayaa warshadaystay.
Shirkaddayadu waxay si guul leh u sahamisay dhammaan noocyo tikniyoolajiyadeed oo loogu talagalay soosaaridda, nadiifinta iyo xaalufinta borotiinada enzyme-ka bakteeriyada injineer ahaan loo abuuray, oo aasaas adag u ah farsamaynta isugeynta ursodeoxycholic acid iyadoo loo adeegsanayo habka enzymatic. Waxyaabaha cusub ee la soo saaray ayaa ah sida soo socota:
1. Markii ugu horeysay, enzyme taxanaha UD ayaa lagu dabaqayaa habka loo yaqaan "ursodeoxycholic acid". Isku-darka enzymatic ee ursodeoxycholic acid waxaa loo sameeyay kimikal ahaan marka loo eego midka hore. Qaabka isku-dubaridu wuxuu leeyahay faa'iidooyinka habka fudud, waxsoosaarka sare iyo ilaalinta deegaanka .;
2. Isticmaalista baraamij cusub, go aansado xaaladaha halsano ee tolashada si aad u hesho dhalo enzyme ah sare adiga oo baranaya qaaciddada halsano;
3. Uruurinta tooska ah ee enzymesyada bakteeriyada wax soo saarka, fududeynta soo saarista iyo tillaabooyinka nadiifinta ee enzyme, iyo in la ilaaliyo waxqabadka enzyme si hufnaan leh.